जनताले साथ दिए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपाल — Motivate News
काठमाडौँ – ईन्जिनियर रामकुमार ठाकुर भ्रष्टाचारविरोधी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि चिन्तित उनी संस्थाको माध्यमबाट समाजमा जागरुकता ल्याउने प्रयासमा छन् । देशप्रति सचेत नागरिकले देश बचाउने अभियान चलाएको भन्ने उनी सर्वसाधारण समेतलाई एकवद्ध हुन आव्हान गर्छन् । भ्रष्टाचारको जालोले समाजलाई गाँजेको भन्दै उनले यो असहज अवस्थाको निकासको लागि मानसिकतामा नै परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि नाममात्र भएको उहाँको टिप्पणी छ । अख्तियार भ्रष्टाचारका नायकलाई समाउन नसकेको र तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र तर्साउन खोजेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले अभियानमा लागेर सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय खोलेका उनी देशभर कार्यक्रम लिएर सकारात्मक चेतना बाँड्ने योजनामा छन् । उनीसँग गंगा बराल ले गरेको समसामयिक कुराकानी ः
भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाल कस्तो संस्था हो ?
अहिले देश भ्रष्टाचारले जेलिएको छ । जताततै भ्रष्टाचारको गन्धले बाटोसमेत गन्हाएको छ । अब पनि जनताहरु सचेत नहुने हो भनें भोली यसले उग्ररुप लिने छ । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा गएको छैन । कसरी हुन्छ यसलाई संस्थागत गरौं र त्यसबाट गुलियो रस लिइरहौं भन्ने सोचले देश आज नराम्ररी थलिएको छ । पहिलो कुरो भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्न सकिएन भनें सम्पूर्ण प्रक्रिया बिथोलिन्छ । नेताहरुले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न पाउनुपर्छ नै भन्न थालेका छन् । जुनसुकै तथ्यांक हेर्ने हो भने राजनीति गर्नेको सूची नै भ्रष्टाचारमा बढी छ उनीहरुले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजे भनें सम्भव छ तर मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि भ्रष्टाचारलाई बढी प्रश्रय दिएको छ । मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने परिपार्टी बढी छ । हामी सबै मिलेर खाउँ र कमाउँ भन्ने भावनाको अन्त्य नभएसम्म हामीले जतिसुकै कुरा गरेपनि त्यो काम नलाग्न सक्छ । अहिले त भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ यो अधिकारलाई मौलिक हक नै हो भन्ने अवस्थामा छन् नेताहरु । यो ठाउँमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने त ठाउँ नै पाइदैन । अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि वाध्य भएर यो संस्था खोलेका हौं । भ्रष्टाचारले न्यायालय पनि बद्नाम भएको छ । जसले न्याया गर्छ भन्ने लागेको छ त्यहीँ बढी भ्रष्टाचार भएपछि अब जाने अर्को निकाय नै छैन । न्यायलय पनि विभिन्न ठाउँमा कुनै न कुनै प्रकारले किनिएको छ । राजनीतिक भागवण्डाले पनि भ्रष्टाचारीलाई बल पुगेको र मैले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने गलत सोचको बिकास भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जनताको बन्न नसकेकामा चिन्तित छु । सानातिना मान्छेलाई तर्साउने र ठूलालाई जस्तोसुकै अपराध गरेपनि छुटकारा दिने चलनले संस्कृति बिग्रिएको छ । अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीलाई किन नियुक्ति गरियो र आज हटाउन खोजियो भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण भएकाले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारका अनेक रुप छन् जुनसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि त्यो दण्डनीय हुन्छ । कुनै भ्रष्टाचार देखादेखि गर्छन् भने अदृश्यले पनि देशलाई संकटमा पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मानिसले वास्ता गर्दैनन् त्यसले पनि उग्र रुप लिँदै गएको छ यसप्रति खवरदारी गर्नुपर्छ ।
तपाइको अभियान कतिको प्रभावकारी छ ?
एक्लैले गरेरमात्र केही हुँदैन । जबसम्म राष्ट्रिय मुद्धामा एकताको भावना विकास हुन सक्दैन तबसम्म यस्ता प्रक्रिया अल्मलिइरहन्छन् । हामी त सहजीकरण गर्ने हौं कतिपय घटनाहरु थाहा नहुन सक्छ तर कसैले जानकारी गराएपछि समन्वय गरेर जान्छौं । कोहीसँग कुनै जानकारी भए खबर गर्न विभिन्न निकायमा आग्रह गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म त विचार गरेर नै बस्यौं तर अरुले केही गर्ला भन्ने नलागेपछि म अघि सरेको हुँ । देशको माया भएकालाई नै सम्झना आउने रहेछ व्यक्तिगत स्वार्थ भएकालाई भनें आफूबाहेक केही पनि सोच्न सक्दैनन् ।
यो संस्थालाई मानिसहरुले कसरी बुझेका छन् ?
बुझाई सबैको आ–आफ्नो हुन्छ । कसैले बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्छन् कसैले यो कुरा राम्रो हो समयमै उठाउनुभयो भन्छन् । म त यो अभियानमा लामो समयदेखि लागेको हुँ । विभिन्न ढंगले खोज र अध्ययन गर्दै आएको थिँए । बाहिरबाट जति नै गरेपनि केही देखिँदो रहेनछ त्यसैले समाजमा एउटा सकारात्मक सन्देश छर्नका लागि म क्रियाशिल छु । यहाँसम्म आइपुग्दा मानिसले अनेकन शंका गरेका छन् किन यस्तो गर्छ ? के हो भित्री स्वार्थ? र कोबाट परिचालित भएको छ ? पनि नभनेका होइनन् जसले हामीलाई यी विषयमा प्रश्न गरेको छ हामीले प्रष्ट पारेका छौं । कसैले दिएला र खाउँला भन्ने सोच होइन समाजका लागि नै हो यो अभियान । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्दै विभिन्न व्यक्ति र संस्था आएका छन् तरपनि भूमिका प्रभावकारी देख्न सकिएको छैन । मुख्य कुरा जबसम्म स्वार्थ हावी भइरहन्छ तबसम्म केही पनि कतै सफल बन्न सक्दैन । आत्मविश्वासले नै प्रत्येक मानिसलाई सही दिशातिर लान्छ विचारमा प्रष्ट भएपछि नै उ वास्तविक मुद्धामा आएर जनताका पक्षमा बोल्ने हो । त्यसैले शंका र संकीर्ण विचार पालेर हिँड्नुभन्दा स्वच्छ मनले अभियानमा आएर सहयोग र समर्थन गर्न आग्रह गर्दछौं ।
अभियान चलाउने क्रममा कहाँ–कहाँ जानुभयो त्यहाँ कस्तो प्रतिक्रिया आए ?
जुन उद्येश्यले हामीले यो संस्थाको स्थापना गरेका थियौं त्यसमा पुग्ने क्रममा छौं । आजै लक्ष्यमा पुग्न सकियो भने भोलि गर्ने कुरा नै बाँकी रहँदैन त्यसैले जिम्मेवार र प्रतिवद्ध छौं । हामीलाई प्रतक्ष्य रुपमा भेटेर होस् वा टेलिफोन सम्पर्कमा राम्रो कमेन्ट आएको छ । त्यो सुझावलाई टिपेर केही सच्याउनुपर्ने छ भने आवश्यक सुधार गर्ने गरेका छौं । धेरैजसोको आइदिनुभएन , भेटिदिनुभएन र हाम्रो पनि गुनासो सुनिदिनुभएन भन्ने गुनासो छ । साधनस्रोतको अभावले गर्दा पुग्न अलिकति समस्या परेको छ तरपनि सक्दो पहल गरेका छौं र गएका छौं । हामी केही समयअघि त्यहाँको अवस्था के रहेछ भनेर बुझ्न धेरै ठाउँ गएका थियौं । स्थानीय बासिन्दाले भोगेका गुनासालाई समेटेका छौं र सम्भव भएसम्म के हो भनेर सरोकारवालासँग प्रतिक्रिया पनि लिएका छौं । एक्लो आवाजले कहिलेकाँही काम नगर्ने ठाउँमा एकता नै बल हो भन्ने उखानले पनि काम गरेको छ ।
यूवाहरुलाई यो अभियानमा लगाउन नसक्नुभएको हो?
देशका धेरैजसो पलायन भएकोमा सरकारले यूवालाई व्यवस्थि तगर्दै सृजनशील बनाउनुपर्छ । यूवाहरु देशका गहना हुन् उनीहरुको सही प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्छ नभए भोलिको दिन झन कहालीलाग्दो हुन्छ । राजनीतिक भ्रष्टाचारको मुहान सङ्लो नभएसम्म विकास र प्रगतिका कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो अभियानमा लाग्न सबै क्षेत्रका सचेत नागरिकहरुको भूमिका रहन्छ । उद्योग कलकारखाना बन्द गरेर नेताहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरेकोमा अब जनताले खोजी गर्नुपर्छ । सामान्य कारणमा पनि कसैलाई कारवाही गर्ने र अप्ठ्यारो पारेर व्यक्तित्वमा नै आँच पु¥याउँछु भन्नेले गरेको गल्तिचाँही कसले हेर्ने ?’ संविधानले भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्नेतर्फ केही नबोलेकामा मेरो आपत्ति छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, घुसखोरी , राजश्व छलिजस्ता अनुचित क्रियाकलापबाट हुने रकम राष्ट्रको ढुकुटीमा बचत हुने हो भनें उक्त रकमले देशको विकास र प्रगतिमा बाटो कोर्न सकिने संस्थाको लक्ष्य रहेको छ । वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार बिकेन्द्रीकरणले सम्पूर्ण देशको मेरुदण्ड न्यायापालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकालाई यसरी प्रभावित गरेको छ कि हामी यसको व्याख्या गर्न असमर्थ भएका छौं , मेरुदण्डलाई नै तोड्ने यस्तो स्थिति आज देखापरेको छ । सर्वसाधारण गरिव जनता तथा मध्यम वर्गीय समुदाय भ्रष्टाचारको चरमोत्कर्ष शिकार भइरहेको र देश बिखण्डनसम्मको स्थितिमा उन्मुख भइरहेको देख्दा आफ्नो देशसँगको मायाप्रितिले अभिप्रेरित भई यो संस्थाको जन्म दिएको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छ त ?
गर्ने नै हो भनेर लाग्ने हो भने असम्भव छैन तर सबैबीच सामूहिक भावनाको बिकास हुनु जरुरी छ । नेताहरुले आफूलाई अनुकुल हुने जे काम पनि गर्छन् एकैछिनमा आपतकालिन बैठक बसेर त्यो निर्णय पारित गर्छन् तर जनतालाई दिन भनें नीति, नियममै अल्मलिन्छन् । भूकम्प गएको १९ महिना भइसकेको छ । तर सरकारले त्यसतर्फ राहत तथा उद्धारका काममा अझैपनि राम्ररी चासो देखाएको छैन । तिमिहरुले अनियममितता र भ्रष्टाचार ग¥यौ भने यो कारवाही हुन्छ भनेर भन्ने हो भनें मानिस तर्सिहाल्छ नि । यहाँ त जसले जे गरेपनि छुट भएकाले यो अवस्था आएको हो । नीतिगत, नियोजित, निर्देशनात्मक, आर्थिक र भौतिक तथा सामाजिक भ्रष्टाचार प्रमुख खतरा हुन् ।
संस्थामा कस्ता व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ?
हामीले सबैलाई समेटेका छौं । सबै क्षेत्रका मानिसको ज्ञान र अनुभवलाई समेटेका छौं । कहाँ र कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुराको अहिले खोजी भइरहेको छ । हामीले कारवाही गर्ने होइन सम्वन्धित निकायलाई यस्तो हुँदैछ है भनेर जानकारी गराउँछौैं । सानो पहलले भ्रष्टाचारको अन्त्य भएर देश बच्छ भनें किन नलाग्ने भन्ने कुरा हो । सुशासनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका प्रशासकहरु, अध्यात्म दर्शन र चिन्तनमा लागेकाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रममा बसेर कलम चलाएकाहरुका साथै सामाजिक र सांसकृतिक चेतना फैलाउने काममा लागेकाहरुको सन्जाल हो यो । म ईन्जिनियरिङ क्षेत्रको मान्छे उता लाग्दा मान सम्मान र आर्थिक उपार्जन पनि हुन्थ्यो होला तर किनआज यो अभियानमा लागे भन्ने प्रश्न पनि आफैंमा गम्भीर छ मेरो मुख्य स्वार्थ नै देशमा सुशासन होस् र जनताले न्याया पाउन् भन्ने हो । धेरैले मलाई यो काम राम्रो होइन , गलत बाटोमा लागिस् पनि भनेका थिए तर आज उनीहरु नै सहकार्य गरौं भन्न थालेका छन् यो अत्यन्तै खुशीको कुरा हो ।
यो संस्थाको माध्यमबाट दिने सन्देश के हो?
देश विकासका मुख्य वाधक र राज्यको प्रमुख शत्रुका रुपमा देखापरेको भ्रष्टाचार, कालाबजारी, घुसखोरी, कृत्रिम अभाव, अनियन्त्रित तथा असन्तुलित महंगीको डरलाग्दो अवस्थाले गर्दा देशका बहुसंख्यक जनताको अवस्था अत्यन्तै जर्जर भएकाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सदाचारको स्थापनाको लागि एकजुट हुन आव्हान गर्दछु ।
Posted in Uncategorized, अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार | Tagged भष्ट्राचार | Leaveareply